Wararka – Page 14 – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
January 14, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Hogaanka xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka ayaa gelinkii dambe ee maanta 14-1-2019 xarunta dhexe ee xisbiga kusoo dhaweeyay in ka badan 150 dhallinyaro oo gabdho iyo wiilalba isugu jira, kuwaa oo si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga UPD.
January 10, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Waxaa gelinkii dambe ee Khamiistii 10-1-2019 Xarunta dhexe ee Xisbiga Midowga Nabadda Iyo Horumarka uu kulan ay ka soo qeybgaleen 120 aqoonyahanka dhallinyarada ah ee xisbiga UPD ku dhexmaray qaar ka mid ah aqoonyahanka xubnaha ka ah xisbiga UPD iyo hogaanka xisbiga.
January 9, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Mas’uuliyiin ka mid ah madaxda Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka (NIEC) oo ay hogaaminayso Guddoomiyaha guddigaas Marwo Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) ayaa Arbaco 9-1-2019 soo booqday xarunta Xisbiga Qaran ee UPD.
January 5, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Maalinnimadii Sabtida aheyd 05-01-2019 waxaa si rasmi ah loo daah-furay xarunta dhexe ee Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka oo noqoneysa xarunta ugu weyn ee uu Xisbi siyaasaddeed oo Soomaali ah yeesho.
November 20, 2018	 0 Comments by UPD Party	in News
October 29, 2018	 0 Comments by UPD Party	in News
Wafdigii uu hoggaaminayay guddoomiyaha Xisbiga ayaa saakay nabad kusoo guryo noqday, waxaana Airportka Aden Ade kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Xisbiga.